Mpanabe, mpanoratra…mpanakanto feno Lasa fa namela mamy maro hotsaroana i Om-Gui… | NewsMada
Mpanabe, mpanoratra…mpanakanto feno Lasa fa namela mamy maro hotsaroana i Om-Gui…
« Nankaiza e ? Lasa izy e !… Tandindonao sisa mitoetra, an-dalana iny e, toy ny fahiny… ». Tsy ilay mpankafy ny Ny Ainga intsony no tian-kambara eto fa ilay loharanon’aingam-panahy, anisan’ny nampijoro ampolotaona maro ity tarika ity. Ilay fantatry ny maro amin’ny hoe Om-Gui na Rabesaiky Guillaume Marie… Teraka ny 10 janoary 1963, nodimandry omaly tany Antsirabe.
Mpitarika sady anisan’ny nanorina ny tarika Ny Ainga, ny taona 1987, no tena ahafantaran’ny maro an’i Om-Gui. Talohan’izay anefa, fantaro fa novolavolaina tao amin’ny tontolon’ny fampianarana izy ary lasa mpanabe. Samy mpampianatra tany Ambohimahasoa ny ray aman-dreniny, izay nodimbiasany. Efa talen’ny sekoly St Joseph eny Andohalo i Om-Gui, fony izy mbola frera lasalianina. Talen’ny kabinetra, teo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena izy, izao nindaosin’ny fahafatesana izao.
Raha ny fitantaran’ny namany ao amin’ny Faribolana Sandratra, nangata-tsodrano tamin-dry frera izy noho ny fahatsapany fa tsy ampy ny sehatra anabeazany any an-tsekoly ary nanitatra izany tamin’ny alalan’ny mozika i Om-Gui. Nanomboka teo ny nidirany teo amin’ny sehatry ny hira.
Mpanabe, mpanoratra, mpamorona…
Iza moa no tsy mahalala fa i Om-Gui no mpamorona ny ankamaroan’ny hiran’ny tarika Ny Ainga ? Tsy vitsy no babo amin’izy ireny ary inoana fa mbola ho maro no hotalanjona raha mahita ny asa sorany hafa. Eny, mpanoratra efa hatry ny ela i Om-Gui : mpanoratra tononkalo, tononkira, tantara fihaino amin’ny onjam-peo, sns. Izay no nahampikambana mavitrika azy tao amin’ny Faribolana Sandratra.
Tsy izay ihany anefa raha ny hoe famoronana no resahina. Niara-niasa akaiky tamin’ny fiangonana katôlika, Rabesaiky Guillaume Marie ary maro ireo hira noforoniny, izay hiraina any am-piangonana. Teo ihany koa ireo hira ho fahatsiarovana ireo olo-malazan’ny fiangonana katôlika, toa an-dry Don Bosco sy Rafiringa.
Om-Gui, be fitiavana
« Tsy mihira fitiavana aho fa ampihirain’ny fitiavana… ». Anisan’ny mampalaza ny tarika Ny Ainga io fehezanteny io. Tsy nataon’izy ireo am-bava fotsiny izany fa tena niainany mihitsy. Nizara fitiavana be dia be i Om-Gui tao anatin’ny tononkirany : fitiavana nenti-nananatra, nampitraka ireo ory … hira mitory fitiavana, hira mahakasika ny andavanandrom-piainan’ny malagasy. Tia ny mpankafy azy ireo manerana ny Nosy ihany koa ry Ny Ainga. Azo lazaina ho izy ireo no tarika voalohany nahatety faritra be indrindra, hatrany ambanivohitra lavitra any. Mpanabe, mpanoratra, mpihira… Ankoatra ireo, efa solombavambahoaka voafidy tany Ambohimahasoa ihany koa i Om-Gui.